Izintshisakalo zasebusika | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El ubusika Ngenye yezinkathi zonyaka lapho isimo sezulu sikumema ukuba ugqoke izingubo ezifudumele futhi ujabulele izindawo ezigcwele iqhwa. Kepha wake wazibuza ukuthi kungani kubanda kancane lapho kuneqhwa? Noma kungani umoya ushaya ikhwela?
Sizokhuluma ngalezi nezinye izifiso kule ndatshana. Thola okuningi ngale sizini esisanda kuyiqala.
1 Kungani umoya wenza umsindo?
2 Kungani kubanda kancane lapho kuneqhwa?
3 Kungani ubusuku obusika obucacile bubanda kangaka?
4 Kubalwa kanjani ukuphola komoya?
Kungani umoya wenza umsindo?
Ezinsukwini eziningi zasebusika - futhi, empeleni, unyaka wonke - umoya ungashaya kanzima. Ngokwenza njalo, uma uhlangabezana nesithiyo, ngokwesibonelo ongaboni, kuzokhiqiza ukushesha okuncane ngoba indawo yokuhamba komoya ngokuhamba iyancipha.
Kungani kubanda kancane lapho kuneqhwa?
Lokhu, yize kungahle kungabonakali, kunencazelo yesayensi, futhi yilokhu: amakhekheba eqhwa, akhiwa amakristalu eqhwa, abamba umhwamuko wamanzi lapho ewa, futhi lowomphunga uphenduka iqhwa. Ukudlula kusuka esimweni segesi (umhwamuko wamanzi) kuya esiqinile (iqhwa) kukhipha ukushisa.
Kungani ubusuku obusika obucacile bubanda kangaka?
Uma uthanda isayensi yezinkanyezi, uqinisekile ukujabulela isibhakabhaka esihle kakhulu sasebusika. Acacile, abukeka ehlanzekile, ... kodwa kubanda ngendlela emangalisayo. Kungani? Ngoba awekho amafu. Isembozo sefu sivimbela ukushisa okutholwe emini, imisebe ye-infrared, ekuqothulweni, futhi-ke, uma kungekho amafu, imisebe ilahlekile.
Ukuzwa okushisayo ukubanda noma ukushisa esikubonayo kungakhathalekile ukushisa kwangempela. Lo mehluko oshisayo phakathi kwesikhumba nendawo ezungezile unqunywa umswakama ozungezile, isivinini somoya nesiqondiso, ukusibekela kwamafu, phakathi kwabanye. (uzothola eminye imininingwane ku- Lesi sihloko). Ngakho-ke, ngokwesibonelo, uma i-thermometer ikhombisa u-10ºC, isibhakabhaka sicacile futhi akukho moya ovunguzayo, sizozwa ukubanda okuncane, 7,5ºC.
Yiba nobusika obuhle 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ilukuluku lasebusika elizokumangaza
Iyini imifula yomkhathi?